လျှပ်စစ်တစ်ယူနစ် ကျပ် ၁၁၀ အထက်ပေးနိုင်လျှင် မီးမပြတ်အောင် ဝန်ဆောင်မှုပေးမည့်ကုမ္ပဏီများရှိဟု ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပြော…! - Myanmar Daily Time
[ June 12, 2019 ] Block လုပ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ဖွင့်ပြောလာတဲ့ စိုင်းစိုင်း	CELEBRITY
[ June 12, 2019 ] လေယာဉ်မတော်တဆမှု ဖြစ်ရပ်ကို ရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့အပေါ် သူ့သဘောထားကို ပြောပြလာတဲ့ လေယာဉ်မှူး ဦးမြတ်မိုးအောင်	NEWS
[ June 12, 2019 ] မိန်းကလေးထုကြီးရဲ့ အသည်းကို ကြွေဖဲ့သွားစေမယ့် အောင်ရဲလင်းရဲ့ စတိုင်အကျဆုံး ပုံရိပ်များ	CELEBRITY
[ June 11, 2019 ] ဒီနေ့ ဖျာပုံဆေးရုံက ဆရာဝန် ၃ ယောက် ကားအက်စီးဒင့်ကြောင့် သေတဲ့ …သတင်းကို ဖတ်ရင်း …ရင်ထဲ တင်းကျပ်ကျပ်ကြီး.. ခံစားမိရတယ်	NEWS
[ June 11, 2019 ] နေပူပူထဲမှာ ဂေါင်းပြောင်ပြောင်နဲ့ အိတ်ထဲပါလာတဲ့ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် အရာလေးတွေကို ထိုင်ရောင်းနေတဲ့ လှိုင်သာယာက အသက်(၈၀)ကျော်အဘ…	ကြားသိရသမျှ
HomeNEWSလျှပ်စစ်တစ်ယူနစ် ကျပ် ၁၁၀ အထက်ပေးနိုင်လျှင် မီးမပြတ်အောင် ဝန်ဆောင်မှုပေးမည့်ကုမ္ပဏီများရှိဟု ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပြော…!
လျှပ်စစ်တစ်ယူနစ် ကျပ် ၁၁၀ အထက်ပေးနိုင်လျှင် မီးမပြတ်အောင် ဝန်ဆောင်မှုပေးမည့်ကုမ္ပဏီများရှိဟု ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပြော…!
May 11, 2019 admin NEWS 2
လျှပ်စစ်တစ်ယူနစ် ကျပ် ၁၁၀ အထက်ပေးနိုင်လျှင် မီးမပြတ်အောင် ဝန်ဆောင်မှုပေးမည့်ကုမ္ပဏီများရှိဟု ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပြော
လျှပ်စစ်တစ်ယူနစ်လျှင် ကျပ် ၁၁၀ နှင့်အထက်ပေးနိုင်မည်ဆိုပါက မီးပြတ်တောက်မှုမရှိဘဲ စိတ်ကြိုက်သုံးစွဲနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည့် ကုမ္ပဏီများရှိသည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း လျှပ် စစ်မီးပြတ်တောက်ရခြင်းနှင့် ပတ် သက်ပြီး မေလ ၁၀ ရက်၌ ရန်ကုန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိုရမ်တွင် အထက် ပါအတိုင်း ဝန်ကြီးချုပ်က ပြော ကြားသည်။
‘‘အဲဒီဈေးနှုန်းကို ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် မီးကို ကြိုက်သလောက် သုံးပါ၊ များများသုံးပါ တိုက်တွန်း မယ့်ကုမ္ပဏီတွေ အများကြီးရှိ တယ်၊ ပေးချင်လွန်းလို့။
မြန်မာ နိုင်ငံကို လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီတွေ ဘာ ကြောင့် စိတ်ဝင်စားလဲ မီးခဏ ခဏပြတ်လို့ စိတ်ဝင်စားတယ်။ မီးမှန်နေရင် ဘယ်သူမှ စိတ်မဝင် စားဘူး’’ဟု ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်း သိန်းက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လျှပ်စစ်မီး ပြတ်တောက်ရခြင်းသည် လျှပ်စစ် ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးမှုများလာ၍ လျှပ်စစ် ပိုမိုသုံးစွဲပါက ပိုမိုအရှုံးပေါ်နေ ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ရန်ကုန် တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က ဆိုသည်။ လျှပ်စ်စမီးကဏ္ဍတိုးတက်ရန် ထို အချက်မှ လွတ်မြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ရမည်ဟု ဆိုသည်။
တက်ရောက်လာကြသူများ မေးမြန်းသည့် မေးမြန်းချက်များကို ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်း
ထို့အပြင် မဟာဓာတ်အားလိုင်းများတွင် အရန်ဓာတ်အားလိုင်းများ ထားရမည်ဟုဆိုသည်။ အကယ်၍ ဓာတ်အားပြတ်တောက်ပါက အရန်ဓာတ်အားလိုင်းမှ လျှပ်စစ်မီးပေးနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ရမည်ဟု ဆိုသည်။
ထို့အပြင် လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးရာတွင် အချို့ဓာတ်အားလိုင်းများ သည် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်နေ ပြီး အဆင့်မြှင့်တင်ရန် လိုသည်ဟုဆိုသည်။
ထိုဓာတ်ကြိုးများကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန် ကုမ္ပဏီများရှိသော်လည်း ထိုက်သင့်သည့် ဈေးနှုန်းပေးရန်လိုသည်ဟု ဝန်ကြီးချုပ်က ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လျှပ်စစ်နှင့် ပတ်သက်၍ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုသည် မီတာခဈေးပေါ၍ လျှပ်စစ်ဖြင့် ချက်ပြုတ်ခြင်းဖြစ် သည်ဟု ဆိုသည်။
လက်ရှိတွင် လျှပ်စစ်မီတာခ ကို ယူနစ် ၁၀၀ အောက် ၃၅ကျပ်၊ ယူနစ် ၂၀၀ အောက်လျှင်၄၀ နှင့်အထက် ကျပ် ၅၀ ကောက်ခံနေသည်။ ထို့ကြောင့် မီတာခ ကို အစိုးရက နှစ်စဉ် တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် ကျပ် ဘီလီယံ ၅၀၀ ကျော် စိုက်ထုတ်နေရပြီး
ရန်ကုန်တိုင်းအတွက် ကျပ် ဘီလီယံ ၃၀၀ ကျော်စိုက်ထုတ်ပေးရသည်။ ယခု ဘဏ္ဍာနှစ် တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် ကျပ်ဘီလီယံ ၆၀၀ ကျော် အရှုံး ပေါ်မည်ဟု လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက ခန့်မှန်းထားသည်။
လက်ရှိတွင် ဓာတ်အားမလုံ လောက်မှုကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံး ကို ဓာတ်အားအလှည့်ကျပေး နေပြီး တစ်နေ့လျှင် လေးနာရီမှ ခြောက်နာရီကြား လျှပ်စစ်မီးပြတ် တောက်နေသည်။
လြှပျစဈတဈယူနဈ ကပျြ ၁၁၀ အထကျပေးနိုငျလြှငျ မီးမပွတျအောငျ ဝနျဆောငျမှုပေးမညျ့ကုမ်ပဏီမြားရှိဟု ရနျကုနျတိုငျးဝနျကွီးခြုပျပွော
လြှပျစဈတဈယူနဈလြှငျ ကပျြ ၁၁၀ နှငျ့အထကျပေးနိုငျမညျဆိုပါက မီးပွတျတောကျမှုမရှိဘဲ စိတျကွိုကျသုံးစှဲနိုငျအောငျ ဆောငျရှကျပေးနိုငျသညျ့ ကုမ်ပဏီမြားရှိသညျဟု ရနျကုနျတိုငျးဝနျကွီးခြုပျ ဦးဖွိုးမငျးသိနျးက ပွောသညျ။
ရနျကုနျတိုငျးအတှငျး လြှပျ စဈမီးပွတျတောကျရခွငျးနှငျ့ ပတျ သကျပွီး မလေ ၁၀ ရကျ၌ ရနျကုနျရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုဖိုရမျတှငျ အထကျ ပါအတိုငျး ဝနျကွီးခြုပျက ပွော ကွားသညျ။
‘‘အဲဒီဈေးနှုနျးကို ပေးနိုငျမယျဆိုရငျ မီးကို ကွိုကျသလောကျ သုံးပါ၊ မြားမြားသုံးပါ တိုကျတှနျး မယျ့ကုမ်ပဏီတှေ အမြားကွီးရှိ တယျ၊ ပေးခငျြလှနျးလို့။
မွနျမာ နိုငျငံကို လြှပျစဈကုမ်ပဏီတှေ ဘာ ကွောငျ့ စိတျဝငျစားလဲ မီးခဏ ခဏပွတျလို့ စိတျဝငျစားတယျ။ မီးမှနျနရေငျ ဘယျသူမှ စိတျမဝငျ စားဘူး’’ဟု ဝနျကွီးခြုပျ ဦးဖွိုးမငျး သိနျးက ပွောသညျ။
မွနျမာနိုငျငံတှငျ လြှပျစဈမီး ပွတျတောကျရခွငျးသညျ လြှပျစဈ ကဏ်ဍ ဖှံ့ဖွိုးမှုမြားလာ၍ လြှပျစဈ ပိုမိုသုံးစှဲပါက ပိုမိုအရှုံးပျေါနေ ခွငျးကွောငျ့ဖွဈသညျဟု ရနျကုနျ တိုငျးဝနျကွီးခြုပျက ဆိုသညျ။ လြှပျဈစမီးကဏ်ဍတိုးတကျရနျ ထို အခကျြမှ လှတျမွောကျအောငျ ဆောငျရှကျရမညျဟု ဆိုသညျ။
တကျရောကျလာကွသူမြား မေးမွနျးသညျ့ မေးမွနျးခကျြမြားကို ပွနျလညျဖွကွေားခွငျး
ထို့အပွငျ မဟာဓာတျအားလိုငျးမြားတှငျ အရနျဓာတျအားလိုငျးမြား ထားရမညျဟုဆိုသညျ။ အကယျ၍ ဓာတျအားပွတျတောကျပါက အရနျဓာတျအားလိုငျးမှ လြှပျစဈမီးပေးနိုငျအောငျ ဆောငျရှကျရမညျဟု ဆိုသညျ။
ထို့အပွငျ လြှပျစဈဖွနျ့ဖွူးရာတှငျ အခြို့ဓာတျအားလိုငျးမြား သညျ နှဈပေါငျးမြားစှာကွာမွငျ့နေ ပွီး အဆငျ့မွှငျ့တငျရနျ လိုသညျဟုဆိုသညျ။
ထိုဓာတျကွိုးမြားကို အဆငျ့မွှငျ့တငျရနျ ကုမ်ပဏီမြားရှိသျောလညျး ထိုကျသငျ့သညျ့ ဈေးနှုနျးပေးရနျလိုသညျဟု ဝနျကွီးခြုပျက ပွောသညျ။
မွနျမာနိုငျငံတှငျ လြှပျစဈနှငျ့ ပတျသကျ၍ စိနျချေါမှုတဈခုသညျ မီတာခဈေးပေါ၍ လြှပျစဈဖွငျ့ ခကျြပွုတျခွငျးဖွဈ သညျဟု ဆိုသညျ။
လကျရှိတှငျ လြှပျစဈမီတာခ ကို ယူနဈ ၁၀၀ အောကျ ၃၅ကပျြ၊ ယူနဈ ၂၀၀ အောကျလြှငျ၄၀ နှငျ့အထကျ ကပျြ ၅၀ ကောကျခံနသေညျ။ ထို့ကွောငျ့ မီတာခ ကို အစိုးရက နှဈစဉျ တဈနိုငျငံလုံးအတှကျ ကပျြ ဘီလီယံ ၅၀၀ ကြျော စိုကျထုတျနရေပွီး
ရနျကုနျတိုငျးအတှကျ ကပျြ ဘီလီယံ ၃၀၀ ကြျောစိုကျထုတျပေးရသညျ။ ယခု ဘဏ်ဍာနှဈ တဈနိုငျငံလုံးအတှကျ ကပျြဘီလီယံ ၆၀၀ ကြျော အရှုံး ပျေါမညျဟု လြှပျစဈနှငျ့ စှမျးအငျဝနျကွီးဌာနက ခနျ့မှနျးထားသညျ။
လကျရှိတှငျ ဓာတျအားမလုံ လောကျမှုကွောငျ့ တဈနိုငျငံလုံး ကို ဓာတျအားအလှညျ့ကပြေး နပွေီး တဈနလြေှ့ငျ လေးနာရီမှ ခွောကျနာရီကွား လြှပျစဈမီးပွတျ တောကျနသေညျ။
ကိုယ့်နာမည်က ပြောပြနေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်း…!
write ups thank you once again. http://www.mrsuccess.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918.network%2Fcasino-games%2F76-sky777
လျှပ်စစ်တစ်ယူနစ် ကျပ် ၁၁၀ အထက်ပေးနိုင်လျှင် မီးမပြတ်အောင် ဝန်ဆောင်မှုပေးမည့်ကုမ္ပဏီများရှိ
This Year : 127294
Total Users : 153179
Total views : 446045